Mamelombelona ny fiaraha-monina: Avereno apetraka amin'ny media sosialy ny atiny taloha | Martech Zone
Talata, Oktobra 6, 2020 Alatsinainy Oktobra 5, 2020 Douglas Karr
Raha manana famoahana WordPress toa ahy ianao izay manana lahatsoratra an'arivony sy an'arivony, dia fantatrao fa manana atiny mahatalanjona ho faty ianao… fotsiny satria tsy mampiroborobo azy ianao. Ny haino aman-jery sosialy dia toerana mahatalanjona hamerenana ireo mpitsidika manan-danja hiverina amin'ny famoahana anao… fa ny lahasa sarotra amin'ny filaharana sy ny fandaminana ny atiny taloha dia be loatra ho an'ny ankamaroan'ny orinasa.
Havaozin'ny Old Post dia plugin WordPress mahafinaritra izay ahafahan'ny mpanonta sy orinasa manana atiny an-taonina hamelona indray an'io votoaty io amin'ny alàlan'ny fametahana azy amin'ny media sosialy.
Velomy ny endrika taloha
Mizarà amin'ny media sosialy - Facebook, Twitter, LinkedIn, Google My Business - ary ento koa ny tambajotra sosialinao avy amin'ny Buffer. Amin'ny ankapobeny, ny tambajotra sosialy malaza rehetra dia tohanana. Revive Old Post dia mamela anao hizara ny atiny amin'ny kaonty maro isaky ny tambajotra sosialy tohanan'ny. Tsy misy fetra.
Fehezo ny fizaranao - Na te-hizara ny lohatenin'ny hafatrao fotsiny ianao dia asio tenifototra, ampio lahatsoratra manokana na manafoana ny rohy ifampizaranao. Mamelombelona ny Lahatsoratra taloha dia mamela anao hanao izany, sns.
Mamorona Hashtags mandeha ho azy - Avelao ny Revive Post taloha hanisy tenifototra voavoatra ho azy amin'ny alàlan'ny fakana azy ireo amin'ireo sokajy voatondro, marika, na saha manokana aza.
Araho ny tsindryo - Revive Old Post dia miasa miaraka amin'ny serivisy fanafohezana URL malaza indrindra ary miharo amin'ny Fanarahana ny fanentanana amin'ny Google Analytics. Io dia ahafahanao mahita ny lazan'ireo hafatrao ary manara-maso ny fifamoivoizana tonga amin'ny tranokalanao avy amin'ny Media Sosial.
Mizarà lahatsoratra, pejy, haino aman-jery ary karazan-doka mahazatra - Na ny lahatsoratra, pejy, sary avy amin'ny WordPress Media Library, WooCommerce na vokatra Big Commerce, Recipe na Projet; Revive Old Post dia afaka mizara azy ireo amin'ny kaonty media sosialinao.
Mizarà mihoatra ny indray mandeha ny hafatrao - Aza avela halazo ny lahatsoratrao aorian'ny fizarana media sosialy tokana. Revive Old Post dia mamela anao hizara ny atiny tranokala amin'ny fihodinana.
Mizarà lahatsoratra amin'ny publication - Vita ny famoronana atiny mahafinaritra amin'ny tranokalanao? Avelao hizara izany amin'ny kaonty media sosialy raha vantany vao manindry ny bokotra famoahana ianao! Ity fampiasa ity dia miasa miaraka amin'ireo lahatsoratra WordPress kasaina hatao mivantana amin'ny fotoana manaraka.
Sivana ny sivana sy ny sokajy isaky ny kaonty - Apetraho ny Tags, Sokajy, ary taxonomie WordPress hafa tianao ho esorina na ampidirina hizara isaky ny kaonty. Raha manana sokajy voahilika voatendry ho azy ny lahatsoratra iray, dia tsy hizara amin'ny kaonty izay nanilihana an'io sokajy io.
Mizarà hafatra isan-karazany - Revive Old Post dia ahafahanao manampy hafatra manokana sy fiovaovan'ny tenifototra amin'ny hafatrao ho an'ny karazany maro kokoa. Ampitao amin'ny fomba isan-karazany ny hafatrao ary tadiavo ireo fanazavana mampody tsara indrindra ho an'ireo fizaranao media sosialy.
Andramo velomina ireo lahatsoratra taloha
Fampahalalana: mpiara-miasa amin'i Velomy ny Lahatsoratra taloha
Tags: mamerina mandefa lahatsoratra talohamiverina amin'ny sosialyhamelombelona ny lahatsoratra talohamamelombelona ny fiaraha-moninazarao ny lahatsoratra talohazarao amin'ny media sosialyWordPressplugin WordPress